Fomba fiaina aorian'ny famadihana ny torohevitry ny vadiny amin'ny psikology
Ny famitahana dia mampiharihary ny fanahy sy ny vatana
Poster 12.07.2018 12.07.2018 Fianakaviana sy tokantrano
Mampifanaraka ny fiovan'ny olon-tiana amin'ny famadihana. Ary matetika isika no tsy vonona amin'izany. Mamaky ny tany amin'ny tongony izany, mitondra azy io ny fahatsapana sy ny voka-dratsiny. Miezaka ny hanorina fifandraisana amin'ny fitokisana sy ny fitiavana isika, ary ny fiovana dia mamadika ny zava-drehetra amin'ny iray lavo. Ary ny totaliny ny lasa sy ny ho avy.
Azo atao ve ny mamela ny famadihana? Tsy misy valiny na torohevitra iray. Fa aza mieritreritra ny fihetseham-pon'ny havan-tianao, ilay antoka momba ny psikology Anna Kiryanova dia azo antoka.
Ny famadihana dia manala ny fanahy
Ary ny vatana koa. Raha tsy maintsy miaritra ny famadihana ianao ary maharitra mandritra ny fotoana maharitra; mitranga izany. Ary ny lehilahy dia olona tsara. Tiany ny ankizy, ny fianakaviana dia manome, ny tsara, ny matanjaka, ny herimpo ... Ary tia azy ianao, tahaka an'i Eleanor Roosevelt tia ny vadiny. Nanambady izy, tsy nino ny fahasambarana; dia niteraka zazalahy enina izy; tia sy nanompo sampy.
Ary avy eo dia hitako tao anaty valizy ny kitapom-pitiavana avy amin'ny mpitantsoratra Lucy. Ary azoko ny zava-drehetra. Ny tany dia namela azy teo ambany tongony. Ady mafy! Nirodana ny zava-drehetra. Saingy tia ny vadiny, ny zanany, ary amin'ny ankapobeny - ny fisaraham-panambadiana dia midika ho fandravana ny asan'ny vadiny. Ankoatr'izany, nampanantena an'i Lucy izy hampitsahatra ny fifandraisana. Ary amin'ny ankapobeny dia malemy fanahy, mibebaka, te-hamonjy ny fanambadiana aho ...
Nofitahiny izy ary nanohy ny fifandraisana tamim-pitandremana. Nolazain'i Eleanor fa tsy fantatra. Ary nanao fihetsiketsehana ara-sosialy mahery setra. Niaro ny zon'ny vehivavy, ny mainty hoditra ary ny fiantrana izy. Nomena tsangambato izy ary nomena valisoa. Fa nanjary ratsy tarehy izy! Avy amin'ny tovovavy iray mahafatifaty miaraka amin'ny volony marevaka, tsipika matevina ary maso miboridana, dia nitodika izy - tsy te hanoratra mihitsy aza aho. Vehivavy tena ratsy tarehy. Ao anaty sariitatra anao. Ary dia nanomboka naneho fihetseham-po ho an'ny vehivavy izy - dia nanomboka tahaka ny tantaram-pitiavana tamin'ny nenitoany izy. Ary i Eleanor mihitsy no nilaza fa tia an'io nenitoa io amin'ny fony manontolo izao izy ...
Izany dia satria tsy misy olona tia. Satria nihotakotaka sy nofatorana ny fihetseham-pony - dia nitohy ny fifandraisan'ny vadin'i Lucy, ary avy eo dia narary mafy i Lucy ary niseho i Missy. Ary ilay mpamadika Roosevelt dia nijaly poliomyelitis ka nahita ny tenany teo amin'ny seza misy kodiarana. Izay tsy nanakana ny tantara nosoratany sy ny famadihany.
Eo foana i Eleanor: mahery fo, mahatoky, mahatoky ary mahatsiravina. Tahaka ny tsy tia rehetra ... Ary maty i Roosevelt. Ary niaiky i Eleanor fa tia azy irery. Niaina izy ireo. Nitsoka izy ireo. Noho ny maha-izy azy dia vita avokoa ny zava-drehetra. Ary tsy nisy nila azy, afa-tsy izy - tsy nenitoa na dadatoa ... Nalahelo sy mahatsiaro ho irery izy io, ity vehivavy vavy voalohany ity.
Ny miaina am-pirahalahiana dia tsy mety maharary. Ny famadihana dia manala ny vatana sy ny fanahy. Ilay niova dia miova tsikelikely. Na dia olona matanjaka sy matanjaka aza; Mbola malahelo ihany izy. Ary mila miaro ny havana isika, fara fahakeliny kely. Ary tandremo ny teninao. Na manaova fanapahan-kevitra ...
← 10 fomba hananganana ankizy tsara
Infografika: inona no tokony ho fantatrao momba ny ankizy amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona →